म कसको मान्छे ? | BLOGSTREET
म कसको मान्छे ?
Posted on February 8, 2011 by Rupesh Shrestha
उनीहरु हुत्तिएर मेरो अगाडि आइपुगे र मलाई ‘म कसको मान्छे हुँ’ भनेर सोधे ।
म अल्लमल्ल परें । चिन्नु न जान्नुका मान्छे आएर मलाई ‘कसको मान्छे होस्’ भनेर सोधेपछि मैले तत्काल दिन सक्ने जवाफ मेरो दिमागमा आएन । उनीहरु को हुन् र किन मलाई किन यस्तो प्रश्न गरिरहेछन् भन्नेतर्फ ध्यान जानु अगाडि नै म दाँया बाँया हेर्न थालें । वरिपरिका सबैजनाले मलाई क्वारक्वार्ती हेरिरहेका थिए ।
अघिदेखि हामी हल्ला खल्ला गरिरहेका थियौं, हँस्सीमजाक गरिरहेका थियौं । तर अहिले उनीहरु कोहि पनि मेरा साथीहरु जस्तो लागेन । सबैको अनुहार उस्तै देखिन थाल्यो । सबैका रुप रँग एउटै देख्न लागें, नाक नक्सा सबैको उस्तै, सबै सधैं देखिरहेजस्तो तर कहिल्यै चिनजान नभएका मान्छेहरु जस्तो । वरिपरि हेर्दै गर्दा उनीहरुको अनुहार देखि डर लाग्न थाल्यो । एउटा एउटा अनुहार केलाएर हेर्न थालें तर विस्तारै सबै अनुहार मेरा जन्मजात दुश्मन जस्ता लाग्न लागे, राक्षस जस्ता… विकृत… विरुप ।
म कस्को मान्छे ? साँच्चै, ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह मेरो आँखा अगाडि फिरफिर गर्न लाग्यो । अगाडि पछाडिका कोहि पनि मेरा आफ्ना मान्छे लागेनन् न म नै कसैको आफ्नो हुँ जस्तो लाग्यो । अघिसम्म त म यीनै मान्छेहरुकाबिच थिएँ अहिले आएर किन यस्तो लाग्दैछ कि यी कोहि पनि मेरा होइनन् र म यी कसैको पनि होइन ।
उनीहरुले फेरि कराउँदै सोधे, “कस्को मान्छे होस् भनेको सुनिनस् ?” मसँग उनीहरुलाई दिने जवाफ थिएन ।
“म कसैको पनि मान्छे होइन । मेरा कोहि पनि मान्छे छैनन् ।” यसो भन्दा उनीहरुले पत्याउने नपत्याउने कुरा होइन, उनीहरुले मबाट खोजेको जवाफ यस्तो होइन ।
उनीहरुमध्येबाट एउटाले कम्मरबाट पिस्तोल निकाल्यो । मेरो निधार अगाडि पिस्तोल ताक्यो । “भन्छस् कि ठोक्दिम् ?” म साँच्चै नाजवाफ भएँ । वरिपरिका मान्छेहरुले टुलुटुलु हेरिरहे । कता कता वरिपरि रहेका मध्यका कोहि मुसुमुसु हाँसिरहेको जस्तो पनि देखें । तर खुट्याउन सकिनँ । “भन्दैनस् ?” पिस्तोल ताक्नेले फेरि भन्यो । मेरो पसिना छुट्यो । हात थरथरि काम्न थाल्यो । जीऊ सिथिल हुन थाल्यो । आँखा धमिलो हुन लाग्यो । अन्धकार छाउन थाल्यो । कोलाहल गुन्जिन थालेजस्तो भयो । अनि सुनें, कसैले भन्यो,”साले ठोक यल्लाई !”
3 responses to “म कसको मान्छे ?”
In simple words,worthreading and watching!!!!!!!
मिट्ठो, “अनि…??” पछि अर्को भागमा हो ?
सायद, उनीहरु भन्दा फरक पक्ष र विपरित विँचार राख्ने मान्छे परियो होला !!! तर न हाम्रा अगाडि कोही छन् न पछाडि कोही छन् ! उनीहरुका अगाडि हामी केही होइनौँ !!!